Archive du 04-mars-2022
Famahanan-dalitra vahoaka Aboridan’ny zava-misy i Rajoelina
Kofona tanteraka ny Fitondram-panjakana Andry Rajoelina, ka zary lasa fizaram-bary sy fanampiana sisa no programa fototra sy asan’ny Filoham-pirenena. Miezaka mafy mitety faritra,
Toy ny isan’andro! Ny tarehimarika sy ny toerana fotsiny no miovaova sy miverimberina fa ny fehiny aloha hatreto dia ny eo ihany no eo.
Herinaratra tapaka lava Nitroatra ny mponin’Antanimenakely
Omaly alina, nanomboka tamin’ny 8 ora, ny orana amin’io mbola mikija dia mikija saingy tsy noraharahian’ireo mponina teny Antanimenakely Ambohimamory izany fa dia mbola nampivoaka azy ireo hanakan-dalana teny an’arabe ihany.
Filohan’ny HCC “Aza rebirebena i Madagasikara”
Naneho ny heviny momba ny toeran’i Madagasikara eo anatrehan’ny adihevitra iraisam-pirenena mikasika ny adin’i Russie sy Ukraine ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) Atoa Florent Rakotoarisoa omaly.
Tanora Malagasy 12 taona dia efa miroso amin’ny sehatry ny fitiavana
Fanadiahadina natao teny anivon’ny fiaraha monina no nahafantarana fa vao 12 taona monja ny zazavavy sy zazalahy Malagasy dia efa miroso amin’ny sehatra ny fitiavana na manao sipa.
Tanora TIM Analamanga Anatin’ny fandaminana tanteraka ny eny ifotony
Hatramin’ny tsy naha teo amin’ny fitondrana azy dia nipetraka ho antoko politika mpanohitra hatrany ny antoko Tiako I Madagasikara, hoy ny filohan’ny Jeune TIM eto Analamanga, Heriniaina Razanadrakoto.
Fahasahiranana sy fahantrana Misy hatrany ireo mifindra fa tsy nahaloa hofan-trano
Fotoana fandoavana hofan-trano ny faha-efatra na fahadimin’ny volana hitsahina tahaka izao. Nanomboka tamin’ny faran’ny volana teo
Fiantraikan’ny raharaha Okrainina - Rosia Tokony hitondra fanazavana ny minisitry ny angovo
Manomboka miha mafy indray ankehitriny ny fahatapahan-jiro lavareny na delestazy. Ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo moa ombay mitady hatrany hanazava ny antony sy ny vahaolana efa omanin’ny fitondram-panjakana momba izany
Goragora ny fampiharana lalàna Feno eny an-tsena indray ny akanjo “vert armée”
Miparitaka be eny an-tsena indray amin’izao ireny karazan’akanjo mitovy amin’ny fanamiana miaramila ireny na ny vert armée.
Dr Ignace Randriamamizafy «Tsy hisy Rosianina hanome vola izany eo»
“Raha mbola firenena sahirana toa antsika tsy mety ny “ni… ni...”. Tsotra ny antony, resaka “géopolitique” sy “géostrategique” io,
Sekoly tsy miankina sasany Mitsoaka an-daharana ny 45%n’ireo mpianatra
Manana anjara toerana lehibe amin’ny fanabeazana eto Madagasikara ny sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana, hoy ny filohan’ny fikambanan’ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana manerana ny nosy, Hery Razafindrakoto.
Minisiteran’ny filaminam-bahoaka Mpianatra ho polisy 1450 no horaisina
Misokatra ny fifaninana hidirana ho mpianatra polisy ho an’ny taom-pianarana 2022. Mpianatra ho polisy miisa 1450 no horaisina izay mitsinjara toy izao.
Fahatrarana toaka tsy ara-dalàna Mitentina 10.000 ariary isaky ny litatra no lamandy aloa
Hisy ny vovonana hanara-maso ny tsenam-barom-panjakana rehetra, raha ny fampahafantaran’ny avy eo anivon’ny sampan-draharaha fitantanana ny hetra.
Dokotera Feziny 20 taona nanampiana ny mpiara-belona
Feno 20 taona amin’ity taona 2022 ity ny naha-mpitsabo an’ny dokotera Seraphine Feziny Fernand, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny Centre Marie Stella etsy Analamahitsy.
Bakalorea 2022 Herinandro sisa ahafaha-misoratra anarana
Nampahatsiahy tamin’ny alalan’ny valan-dresaka miantefa amin’ny mpianatra, Ray aman-dReny ary indrindra ny mpanabe ny Minisitran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana (MESupReS)
Fankalazana ny 8 martsa Nafindra ao Antsirabe noho ny toetr’andro
Voatery nafindra ao Antsirabe, Faritra Vakinankaratra ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an’ny vehivavy izay hotanterahina amin’ny Talata 08 Martsa ho avy izao raha tokony hatao any Manakara,
Fanovana governemanta «Tsy hampiova zavatra, rafitra no olana eto»
“Momba ny fanovana governemanta na fitsipaham-pitokisana, na inona na inona dia governemantan’ny miaraka amin’i Rajoelina io,
Halatra moto miampy daroka 12 ny fitarainana voaray tamin’ny febroary
Manoloana ny trangana halatra moto sy ny fidarohana mpitondra moto amin’ny bois rond izay niseho tato ho ato teto Antananarivo Renivohitra dia nandray andraikitra manokana ny polisim-pirenena hiadiana amin’izany.
Fiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro Marefo indrindra i Madagasikara
Mena avokoa ankehitriny ny tondro mikasika ny fiovaovan’ny toetr’andro raha ny tatitra andiany faha 6 voaray teo anivon’ny fivondronan’ireo manam-pahaizana iraisampirenena momba ny fivoaran’ny toetr’andro na GIEC.
ISSOF Manampy ny orinasa mba hiarin-doha
Tolotra iray entina hanampiana ireo mpandraharaha eto amintsika efa manana orinasa ny Next login. Karazana toro-hevitra sy tohana entina hanampiana azy ireo izy ity hanatsarana bebe kokoa ny sehatra misy azy mba hisy
Tsindry ara-diplaomatika Manomboka sahirana ny Fitondrana
Namoaka fampitam-baovao nanamafy ny tsy fiandaniana eo anatrehan’ny ady any Ukraine ny Minisiteran’ny raharaham-bahiny Malagasy omaly, saingy nahagaga fa nofafana.
Antanamanjaka -Antsirabe Nidoboka am-ponja ilay rangahy nidaroka zaza
Zazalahikely iray havan’ilay Ramatoa izay taizan’izy mivady no nodarohan’ilay rangahy isaky ny mamo izy tao Antanamanjaka Antsirabe, Faritra Vakinankaratra.
Mpanohana ny Fitondrana Maro ny menatra sy latsa-nenina
“Menatra sy latsa-nenina”, io no fehezanteny mahafaritra ny fihetsiky ny ankamaroan’ireo mpomba ny fitondrana amin’izao fotoana izao.